Arsenal oo 5 iyo 0 ku xusul daartay Aston Villa | Dhacdo.com
Home Ciyaaraha Arsenal oo 5 iyo 0 ku xusul daartay Aston Villa
Arsenal oo 5 iyo 0 ku xusul daartay Aston Villa
Arsenal ayaa u awood sheegatay kooxda Aston Villa ka dib markii ay 5-0 ku xasuuqeen iyadoo Giroud, Cazorla, Ozil, Walcott iyo Bellerin ayaa dhamaantood shabaqa soo taabteen.
Arsenal ayaa gurigeeda Emirates Stadium ku soo dhawaysay kooxda Aston Villa. Gunners ayaa doonaysay inay sii wado guulihii ay kulamadii ugu dabaysay ka gaadhaysay horyaalka Ingiriiska. Arsenal ayaa doonaysay inay sii wado dagaalka ay ugu jirto sidii ay ugu soo bixi lahayd kaalmaha hore ee loogu soo baxo Champions Leaque-ga.
Ciyaarta dhexmartay kooxaha Arsenal iyo Aston Villa ayaa ku bilaabatay dardar fiican, waxaana bilawgii ciyaartaba Aston Villa dhib ku ahaa Theo Walcott halka Fabian Delph isku dayay inuu kooxdiisa gool uga dhaliyo meel goolka Arsenal u jirtay 25 yards balse kubbada uu tuuray ayaan awood badan lahayn.
Daqiiqadii 8 aad ayay Arsenal heshay fursada ay ciyaarta hogaanka ugu qabatay waxaana goolka u dhaliyay Olivier Giroud kaas oo ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Gunners hogaanka kula wareegay. Kubbad cajiib ah oo uu Mesut Ozil meel fiican udhigay ayuu Groud kooxdiisa ugu dhaliyay goolka furitaanka. Ozil ayayy caawintani u ahayd tii labaad ee uu xili ciyaareedkan sameeyay wuxuuna caawinta hore ka sameeyay isla kulankii Aston Villa.
Inkasta oo ay Aston Villa ka bosishan fiicnayd Arsenal isla markaan ay qaybta hore ku saraysay boqolkiiba 52.8% ayay haddana ku guuldaraysatay inay shabaqa Arsenal soo taabato. dhamaadkii qaybtii hore ee ciyaarta ayay Aston Villa heshay fursad fiican kadib markii uu Andreas Weimann isku dayay inuu kooxdiisa goolka barbaraha udhaliyo balse goolhaye David Ospina ayaa ka badbaadiyay.
Arsenal ayaa fursado fiican abuurtay laakiin qaybta hore ayay samaysay laba bartilmaameed oo kaliya, waxayna ku guuldaraysatay inay wax goolal kale ah ka dhaliso kooxda martida u ahayd ee Aston Villa.Qaybtii hore ee ciyaarta ayaana lagu kala nastay 1:0 ay Arsenal hogaanka ku haysay.
Markii layskugu soo laabatay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Arsenal u muuqatay inay doonaysay inay ciyaarta si fiican guul uga gaadho, waxayna markiiba bilawday inay si fiican u ciyaarto.
Daqiiqadii 56 aad ayuu Mesut Özil oo goolka hore ee Arsenal caawiye ka ahaa uu markiisa kooxdiisa udhaliyay goolka labaad, wuxuuna ciyaarta u badalay 2:0 ay Arsenal hogaanka ku dheeraysatay. Haddii uu markii hore Giroud caawinta goolkiisa ka helay Ozil ayuu isaguna markiisa abaalka guday wuxuuna Ozil ka caawiyay inuu Gunners goolka labaad udhaliyo.
Arsenal ayaa jaanta iyo jiibta isla heshay waxayna daqiiqadii 63 aad la timid goolka saddexaad, waxaana markan Arsenal goolka saddexaad udhaliyay Theo Walcott kaas oo markiisa ciyaarta ka dhigay 3:0 ay Arsenal hogaanka ugu xaragoonayso. kubbad ay Walcott iyo Cazorla si fiican u soo wada ciyaareen ayay walcott kooxdiisa ugu dhaliyay goolka saddexaad.
Aston Villa ayaa u muuqatay inay isku dhexyaacday, waxaana daqiiqadii 74 aad lagu dhigay rekoodhe kadib markii uu goolhaye Brad Guzan uu qalad ku galay Akpom, waxaana rekoodhahaas gool u badalay Santi Cazorla. ciyaarta ayaana noqotay 4:0 ay Arsenal ku dhibaataynayso kooxda martida u ahayd ee Aston Villa.
Arsenal ayaa gurigeeda Aston Villa kaga dhalisay 150 gool, waana ka horeeya oo ay goolasha ugu badan Arsenal gurigeeda kaga dhalisay kooxaha Everton(184), ManUnited (157) & iyo ManCity (151).
Xiddigaha Arsenal ayaana baadigoob ugu jiray inay helaan goolkii shanaad ee ciyaarta, waxaana ay taasi u suurogashay waqtigii dheeriga ahaa ee ciyaarta lagu daray markii da’ yarka Bellerin uu shabaqa soo taabtay taasoo ciyaarta ka dhigtay inay ku soo dhamaato 5-0 oo ay ku badisay koxoda reer London.
Arsenal ayaana u soo kacday kaalinta 5aad iyagoo 42 dhibcood, waxaana ay ku dhibco yihiin kaalinta afaraad ee Southampton kuwaasoo caawa ciyaaraya.